Kitapo vektor maimaim-poana handravahana ny Noelinao amin'ny Krismasy | Famoronana an-tserasera
Mercedes Big Real | | Inspiration, Cartoon vector
Isika rehetra amin'ny Krismasy dia tianay ny mandray sy mandefa Noely hiarahaba ny krisimasy sy ny taom-baovao ho an'ny olon-tiantsika. Mazava ho azy fa arahabaina ireo, tianay ny hamorona azy ireo amin'ny fitiavana sy fikarakarana, noho izany omenay anao a fonosana loharanon-tsary hanao anao manokana Krismasy amin'ny fomba tsotra sy am-boalohany.
Azoko ampiasaina amin'ny fampiharana hafa ve izany?
Mazava ho azy, ho fanampin'ny Krismasy xmas, azontsika atao koa ny mampiasa ireto loharano sary ireto toa singa dokam-barotra. Azontsika atao ny mampiasa an'ity fonosana ity, ohatra, mba hanaovana dokambarotra ho loharanom-pahalalana ho an'ny fivarotana. Ireo sary vector ireo dia azo ampiasaina roa ho an'ny fampiasana manokana sy ara-barotra. Afaka manome anao aho Tombony maro ary mety ho a fomba tsotra hisarika ny besinimaro bebe kokoa mandritra ireo daty ireo, ankoatry ny fanomezana sary tsara sy fampisehoana tsara ho an'ny besinimaro.
fampiasana singa tena misolo tena an'ireo fety ireo toy ny kintana, fanomezana, tsipìka ary hazo cemara, ankoatry ny endrika geometrika ampiasaina, afaka maneho ny haingo Krismasy. Ny fitambaran'ny endritsoratra sy ny fampiasana ny feo volamena sy fotsy, mitondra kitika Noely sy kanto. Mampiasa ny endritsoratra alaina tahaka ny sora-tànan'ny litera sy endritsoratra nentim-paharazana miaraka amin'ny fijery hieratic kokoa izay afaka manome endrika hafa sy hafa kokoa amin'ny Krismasy hafa. Ny fombany minimalist sy madio no fiheverana ny hakantony sy ny fiheverana amin'ny antsipiriany.
Raha ny fahitako azy, dia Pack iray mety ho izy tena ilaina amin'ireo antoko ireo, Koa satria ao anatin'ny endrika minimalista miaraka amin'ny tonony tsy miandany sy manintona, dia afaka mahita kisarisary krismasy maromaro ianao handravahana. Azonao atao ny misafidy ny kisary mifanaraka amin'ny zavatra tianao sy ilainao.
Hampidina ny fonosana eto.
Raha mila loharano bebe kokoa ianao na te hanadihady bebe kokoa dia azonao atao ny mitsidika ilay pejy "Windows voaravaka oram-panala noforonin'i Snow Windows" o "Fampianarana horonan-tsary 10 ho an'ity Krismasy ity izay tsy azonao adino".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Kitapo vektor maimaim-poana handravahana ny Noelinao amin'ny Krismasy